I-US Right to Know Sues State State for Documents mayelana Nemvelaphi yeSARS-CoV-2 - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Posted on November 30, 2020 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoMsombuluko, Novemba 30, 2020
Ukuze uthole olunye ulwazi lokuxhumana: UGary Ruskin (415) 944-7350 noma USainath Suryanarayanan
I-US Right to Know, iqembu lezempilo lomphakathi elingenzi nzuzo, wafaka icala namuhla ngokumelene noMnyango Wombuso wase-US ngokwephula izinhlinzeko ze-Freedom of Information Act (FOIA).
Leli icala lesibili le-FOIA elifakwe yi-USRTK njengengxenye yemizamo yalo yokuthola okwaziwayo ngemvelaphi yenoveli coronavirus SARS-CoV-2; ubungozi bamalebhu okuphepha; kanye nocwaningo lokuzuzisa umsebenzi, oluhlose ukukhuphula ukwanda kokutheleleka noma ukubulala kwamagciwane abangelwa ubhubhane.
Icala lanamuhla, elifakwe eNkantolo yesiFunda e-US eNyakatho yesiFunda saseCalifornia, lifuna imibhalo yoMnyango Wezwe kanye nezincwadi noma i-Wuhan Institute of Virology yaseChina, i-Wuhan Center for Disease Control and Prevention, ne-EcoHealth Alliance, ebibambisene futhi ixhasa ngemali I-Wuhan Institute of Virology, phakathi kwezinye izifundo.
Icala elisha lilandela elifakwe yi-USRTK ngoNovemba 5 ngokumelene neNational Institutes of Health ngokwehluleka kwayo ukuhlinzeka ngamarekhodi ngemvelaphi yeSARS-CoV-2. Kusukela ngoJulayi, i-USRTK ifake izicelo ezirekhodiwe zomphakathi ezingama-43, zombuso, kanye nezamazwe omhlaba ezifuna imininingwane ngemvelaphi yeSARS-CoV-2, kanye nezingozi zamalabho ezokuphepha kanye nocwaningo lomsebenzi.
I-SARS-CoV-2 yigciwane elidala lesi sifo i-Covid-19.
Ukuthola eminye imininingwane ngophenyo lwe-USRTK, bheka "Kungani sicwaninga ngemvelaphi yeSARS-CoV-2, amalebhu ezokuvikela kanye nocwaningo lwe-GOF”Nohlu lokufundwayo oluku-“Uyini umsuka weSARS-CoV-2? Ziyini izingcuphe zokucwaninga ngomsebenzi?”Ezinye izindatshana ezivela kuphenyo lwe-USRTK zifaka"I-EcoHealth Alliance yahlela isitatimende sososayensi abalulekile "ngemvelaphi yemvelo" ye-SARS-CoV-2, ""Ukusebenza kwezifundo ezisemqoka ngemvelaphi ye-coronavirus ngokungabazeki; amaphephandaba ezesayensi aphenya, ""Imvelo kanye ne-PLoS Pathogens ihlola ubuqiniso besayensi bezifundo ezibalulekile ezixhumanisa i-pangolin coronaviruses kumsuka weSARS-CoV-2,"Futhi"Usosayensi onokushayisana kwezintshisekelo ezihola iLancet COVID-19 i-task force emsukeni wegciwane. "
I-USRTK imelwe ecaleni loMnyango Wezwe nguDaniel C. Snyder wamaHhovisi Omthetho kaCharles M. Tebbutt, PC, noLaura Beaton weShute, Mihaly & Weinberger LLP.
I-US Right to Know iqembu lokucwaninga eliphenya ngokugxila ekubonakaleni kwezempilo yomphakathi. Ngemininingwane engaphezulu, bheka usrtk.org.
Ama-Biohazards, Ukukhishwa Kwezindaba